ပထမဆုံး Meizu 16S သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြား | Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လက Meizu သည်၎င်း၏စီးရီး ၁၆ ကိုစတင်ခဲ့သည်, မူရင်းမော်ဒယ်နှင့် Plus အားမူကွဲတွေ့ရှိခဲ့ရသော, နောက်ပိုင်းတွင် Meizu 16X သည်အလယ်အလတ်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များ။ ဖုန်းများသည်သူတို့၏ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေး၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ စျေးနှုန်းတို့ကိုချီးကျူးခဲ့သည်။ အခုတော့ ဆက်ခံသူ၏သတင်းသည်ဝဘ်ပေါ်၌စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်.
၎င်းကို Meizu ၏စီအီးအိုကအတည်ပြုခဲ့သည် ၎င်းဆက်ခံသူများကို Meizu 16S ဟုခေါ်သည်။။ ထိုနောက်မှပန်ကာတစ်ခုသည် Meizu 16S ကို render လုပ်ပြီး၎င်းသည်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းနေပြီးပထမဆုံးရရှိနိုင်သည်။
ပုံတွင် Meizu 16S ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ပြထားသည်၎င်း၏ယခင်လိုပဲ။ သို့သော်၎င်းသည် bezel များကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်ထစ်မရှိချေ။ Screen ရဲ့အောက်မှာလက်ချောင်းစကင်နာတစ်ခုရှိတယ်၊ နောက်တစ်ခုကနောက်ဘက်မှာရောနှစ်ဖက်စလုံးမှာအသေးစိတ်မဖော်ပြထားတာပါ။ ရှေ့ကင်မရာဘယ်မှာလဲ။ ဤသည်ကိုလူသိများရန်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာဖြစ်သည်။
ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ rendering device မှာနောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးပါရှိတယ်။ ၎င်းတို့ကိုဖုန်း၏အလယ်တွင်ထား ရှိ၍ ဒေါင်လိုက်ထားသည်။ ဓာတ်ပုံအာရုံခံကိရိယာများအောက်တွင် Flash Ring တစ်ခုရှိသည်။ ဓာတ်ပုံတွင်ပြသထားသောကင်မရာနှင့် ၃.၅ မီလီမီတာအသံပေါက်တို့ပါ ၀ င်သောအောက်ဘက်တွင် Type-C port ရှိသည်။
ဖြစ်ကောင်း, ကမောင်းနှင်လိမ့်မည် Snapdragon 8150 နှင့် 8 GB RAM ကိုတက်ရပါလိမ့်မယ်။ Meizu အနေဖြင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၊ ဖုန်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထပ်မံတိုးချဲ့သင့်သည့်အချိန်ကာလကိုထည့်သွင်းရန်အချိန်ကျပြီဖြစ်သည်။ (ရှာတွေ့သည်: Meidu သည် Snapdragon 8150 ဖြင့်ဖုန်းကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်).
ကျန်ရှိနေသော, နောက်ဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်သည့် Android version နှင့်အတူလာလိမ့်မည် ခြေထောက် ၉.၀FullHD + resolution ဖြင့်မျက်နှာပြင်အကျယ် ၆ လက်မရှိသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အတွင်းသိုလှောင်မှုနေရာနှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကြာခင်လူသိများလာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော Meizu 6S Plus နှင့်လည်းလာနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu 16S ၏ပထမ ဦး ဆုံး rendering သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါက်ကြားသွားသည်။ နောက်ကင်မရာသုံးဆနှင့် notch သို့မဟုတ် bezels များမရှိတော့ပါ။